Duqa degmadda Gaalkacyo oo ka hadlay Mooshin laga soo gudbiyaay (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 18, 2018 2:03 g 0
Duqa Degmadda Gaalkacyo ee Dowladda Puntland Mudane Maxamuud Yaasin Tumey oo Maanta Warbaahinta kula hadlay Xafiiskiisa Magaaladda Gaalkacyo ee Xarunta Gobalka Mudug ayaa ka jawaabay eedaymo loo soo jeediyaay.
Xildhibaano shalay la hadlay Radio daljir ayaa Guddoomiyaha ku eedeyaay in uu musuq maasuq sameyaay,kuna tagrifalay hantida dadweynaha iyago sheegay in Mooshin ay ka gudbiyeen.
Duqa Gaalkacyo ayaa arrimahas ku tilmaamay mid been abuur ah wuxuna sheegay in xildhibanadas laftirkooda ay sameyeen arrimo aad looga xumaado,isagoo sheegay in lacago ay ka qaateen barakayaasha kunool duleedka Magaaladda Gaalkacyo.
Tumey ayaa sheegay in Dacwad ku socoto Xildhibaanada Mooshinka kaso gudbiyeey isla markaana lagula xisaabtamyo dhac ay u geeysteen dad masaakin ah oo barakacayaal ah ,kuwaas oo ay ka qadeen lacago aysan awoodin danyartu,isago sheegay in kiis uu kayaalo Maxkamadda Gobalka.
Duqa Degmadda Gaalkacyo oo ah nin dhalinyaro ah aya mashaaric hormarineed ka fuliyaay magaaladda Gaalkacyo ee Xarunta Gobalka Mudug waxaana uu kaga duwanyahay Madaxdii hore ee gobalka soomaray daacadnimo iyo shaqo wanaag,isago dhowr jeer ku baraarujiyeey shacabka magaaladda inay la shaqeyaan Maamulkiisa.